कला सुब्बाको अनुहारमा मेकअप गर्न मन छ : सोफी सुनुवार - अन्तर्वार्ता - नारी
कला सुब्बाको अनुहारमा मेकअप गर्न मन छ : सोफी सुनुवार
फाल्गुन २१, २०७५ सोफी सुनुवार
 लक्ष्मी भण्डारी थापा
तपाईंले नेपाली महिलाहरूमा ख्याल गरिरहेको कमन ब्युटी मिस्टेक्स ?
धेरैले लिपिस्टिकमा लाउड कलर लगाउँछन्, आइब्रोलाई धेरै गाढा बनाउँछन् र कालो पेन्सिलले लिपलाइनिङ बनाउँछन् जसले एकदमै आर्टिफिसियल देखाउँछ ।
यस्तो प्रोडक्ट जसको अभावमा तपाईं आफ्नो कला प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्न ?
आइब्रो रिफाइनिङ प्रोडक्ट ।
कुन सेलिब्रेटीको अनुहारमा कस्तो मेकअप गर्ने इच्छा छ ?
कला सुब्बाको....किनभने उहाँ सधैं आफ्नो मेकअप आफैं गर्नुहुन्छ । उहाँलाई नेचुरल मेकअपमा सिंगार्ने इच्छा छ ।
तपाईंलाई मनपर्ने मेकअप ब्रस ?
फाउन्डेसन ब्रस... किनभने मेरो यो ब्रस मल्टी–प्रपोसको छ ।
यस्तो अवस्थालाई तपाईं कसरी सुल्झाउनुहुन्छ ? यदि कुनै कस्टमरले आफ्नै स्टाइलको मेकअप गरिदिन भन्यो, जुन उनलाई पटक्कै सुहाउँदैन ।
यस्तो अवस्था धेरै पटक फेस गरेकी छु । मैले त्यस्ता क्लाइन्टको बानी नै परिवर्तन गरिदिएकी छु । यस्तो अवस्थामा म उहाँलाई एकपटक प्रयोग गर्नुहोस् नसुहाए मेटिदिन्छु भनेर कन्भिन्स गर्छु । लगाइसकेपछि आफूलाई सुहाउँदो पाउँछन् र आफूलाई सुहाउँदो मेकअप रोज्छन् ।
अनुहारको कुन भागको मेकअप गर्दा तपाईंलाई सबैभन्दा बढी उत्साह र खुसी मिल्छ ?
आँखाको मेकअप गर्दा । आँखाको मेकअपले हाम्रो क्यारेक्टरलाई क्यारी गरिरहेको हुन्छ । आँखाको नानीको कलरलाई म्याच र कम्प्लिमेन्ट गर्ने खालको मेकअप गरियो भने हाम्रो व्यक्तित्व वाउ देखिन्छ ।
तपाईंको सुन्दरताको सिद्धान्त के हो ? के मेकअप गर्दैमा सबैजना सुन्दर देखिन्छन् ?
मेरो सुन्दरताको सिद्धान्त भनेकै कला हो । आफूसँग भएकै कुरालाई अझ सुन्दर देखाउनु हो । मेकअपले सबैलाई सुन्दर देखाउँछ किनभने यसले व्यक्तित्वलाई उँचो बनाउने काम गर्छ । मेकअपबिना पर्सनालिटी स्ट्रङ देखिँदैन । यसले भित्री समस्यालाई पनि लुकाइदिन्छ ।
आकर्षक र ग्ल्यामरस देखिने क्विक ब्युटी टिप्स ?
मेकअपका ३ वटा स्टेप हुन्छन् । बेस सफा हुनुपर्‍यो, मोइस्चराइजर, फाउन्डेसन वा बीबी क्रिम, आइमेकअप, दिउँसो नेचुरल कलरका लिपिस्टिक तथा आइब्राउज ।
सामाजिक सञ्जालले मेकअप बिजनेसमा कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ ?
धेरै सजिलो र सहयोग भएको छ । मैले फेसबुकबाटै पनि काम पाइरहेकी छु । यसैबाट धेरैले फलो गरिरहेका हुन्छन् । यो क्षेत्रको विकासका लागि सोसल नेटवर्कले ठूलो भूमिका खेलिरहेको छ ।
आफ्ना बारेमा अचम्म लाग्ने कुनै एउटा कुरा ?
म खुला किताब हुँ । म कामको प्रेसरमा पनि रमाइलो गरिरहेकी हुन्छु । म रोएको कसैले
देखेका छैनन् ।